Soo gelitaanka Norway – xeerarka karantiilka iyo baaritaanka - helsenorge.no
Heerarka caabuqa COVID-19 ee wadamada ka baxsan Norway ayaa hadda aad u sareeya. Waa qasab inaad gashaa karantiil muddo 10 maalmood ah markaad soo gasho Norway adoo ka yimid wadan kale marka laga reebo dhaw gobal oo ka tirsan wadamada Nordic ga ah.
Ilaa in shardiga lagaa dhaafay maahee, waa qasab inaad joogtaa hudheelka karantiilka intaad karantiilka ku jirto. Booliiska ayaa ku siin kara xog ku saabsan hudheelada karantiilka lagu galaayo ee ku yaala xaduudaha iyo meelaha kale ee lagasoo galo Norway.
Waa inaad buuxisaa foomka diiwaangelinta safarka ka hor intaadan safrin
Waa inaad keenta caddeyn ah baaritaanka koronada oo negative, oo laga qaaday 72 saacadood gudaheed intaadan imaan
Waa inaad is baarta markaad Norway imaado.
Waa inaad karantiil gasho 10 maalmood Norway marka timaado.
Diiwaangelinta so gelida dalka
Qof walbo oo Norway imaanayo, waa inuu soo buuxiyo foomka soo gelitaanka wadanka, waa diiwaangelin dijitaal ah, marka buuxiso foomka waxaa helaysa rasiid ama warqad laga rabo inaa tusto booliska markaad wadan so galaysid.
Waa inaad isdiiwaangalisaa ka hor intaadan imaan Norway, laakin 72 saac gudahood waqtiga soogalitaanka ah.
Tag diiwaangelinta dijitaalka ah (entrynorway.no)
Shurrudaha lagu baaro dadka imanaya Norway
Haddi aad ku sugnayd aag ay ka jirto waajib karantiil 14kii maalmood ee la soo dhaafay, waa inaad qaadata tijaabo ama baaritaan cudurka koronada ee covid-19 markaad Norway timaaddo.
Tijaabada wa in lagu qaadaa garoonka diyaaradaha ama xuduudaha wadanka, qaaba baaritaanka la oggol yahay waa PCR ama tijaabada degdega ah ee antigen.
Tijaabadani waa tijaabada koowaad ee lagu yareynayo muddada karantiilka (warbixin dheeraad ah ka akhriso qaybta karantiilka)
Dadka ka yar 12 sano
Shaqsiyaadka awooda inay cadeeyaan inay horay u qaadeen caabuqa COVID-19 lixdii bilood ee lasoo dhaafay, oo lagu xaqiijiyay baaritaanka Covid-19.
Dadka ka reeban waajibadka karantiilka inta lagu jiro saacadaha shaqada iyo waqtiga firaaqada iyaado la raacayo § 6a.
Kuwaas waxaa ka mid ah dadka sida joogtada ah uga safra xadka Sweden ama Finland si ay u shaqeeyaan ama u aadaan iskuul.
Wadayasha xirfadleyda ah ee gadiidka masaafada dheer iyo shaqaalaha tababarka ee aan ka shaqeyn tareenada xamuulka.
Dadka sida adag lagama maarmaanka u ah in ay awoodaan in ay ilaashaadan howl qabadka howlaha bushada ee muhiimka ah ama ay daryeelaan baahiyaha aasaasiga ah ee dadweynaha, marka aysan macquul aheyn in la sameeyo baaritaan.
Waxaa laguula soo xirriiri doonaa oo keliya haddii natiijada baaritaankaagu yahay in xanuunka laga helay. Haddi aad leedahay ciwaan helsenorge.no, wa geli karta oo waxaa ka heli karta natijaada baaritaankaga. Sheybaarada qaarkood waxay leeyihiin xalal u gooni ah oo ay ku arki karaan natiijada baaritaanka ka baxsan helsenorge.no, haddi aay jirto waa lagu soo ogeysiin doonaa.
Cadaynta muujinaysa baaritaanka lagaaga waayay COVID-19
Dadka shisheeye ee soo galaaya Norway ayagoo ka yimid wadan ay qasab tahay dadka ka yimaada inay karantiil galaan waa inay keenaan cadaynta xaqiijinaysa inay soo mareen baaritaanka korona fayras lagana waayay caabuqa.
Baaritaanka waa in la qaaday 72 saacadood ee ugu danbeeyay kahor markuu qofku soo galo Norway
PCR iyo baaritaanka degdega ah ee kahortaga caabuqa ayaa ah qaababka baaritaan ee la aqbalaayo
Shahaadadu waa nay ku qoran tahay luuqada Norway, Swedish, Danish, Ingiriis, Fanransiis ama Af Jarmal
Shaqsiyaadka soo socda uma baahna inay keenaan shahaadada cadaynaysa inaysan caabuqa qabin:
Dadka u dhashay Norway
Dadka shisheeyaha ah ee dagan Norway oo wata ogolaanshaha daganaansho ama xaqa daganaansho
dadka shisheeye e gabi ahaanba muhiimka ah si loo joogteeyo shaqooyinka muhiimka u ah bulshada, ama loo buuxsho baahiyaha gaarka ah ee bulshada, oo uu jiro khatar ku dhacaysa nafta ama caafimaadka haddii loo diido inay soo galaan wadanka
Shaqsiyaadka shisheeye ee taransidka ku maraaya wadanka
haqsiyaadka shisheeye ee sida joogtada ah ugu safra Norway kana yimaada Sweden ama Finland si ay wax u bartaan ama u shaqeeyaan, marka laga reebo shaqaalaha caafimaadka ee joogay wax ka badan todobo maalmood banaanka Norway
dadka magangalyo doonka ah iyo qaxootiyaasha dib u dajinta loo sameeyay
dadka shisheeye ee ogolaanshaha daganaansho ka haysta Norway sida ku cad sharciga socdaalka qoyska
dadka wadanka usoo galaaya adeegga diblomaasiyada, wadan shisheeye ama shaqooyinka safaarada
kooxo gaar ah oo ka mid ah ciidanka milatariga
dadka shisheeye ee ka shaqaynaaya hawl la xariirta rarista badeecooyin ama rakaab, ama una socda/ka imaanaaya hawlahaas
bayloodyada iyo darawalada doomaha ee u safraaya ama ka imaanaaya shaqada
ilmaha ka yar 12 sano jir
Dhammaan dadka kasoo safraaya Boqortooyada Ingiriiska iyo Koonfur Afrika
Tiro shuruudo ah ayaa lagusoo rogay dadka ka imaanaaya UK iyo Koonfur Afrika, kuwaas oo dheeraad ah ku ah xeerka guud ee quseeya diiwaan gelinta marka qofku soo galo iyo mudada karantiilka 10 maalmood ah. Shuruudaha ayaa qabanaaya qof kasta oo ka wayn 12 waana sida soo socota:
Baaritaanka PCR (baaritaanka COVID-19) qof kasta oo soo galaaya Norway joogay UK ama Konfoor Afrika 14kii maalmood ugo danbeeysay kahor intuusan soo gelin Norway.
Waa in laga baaraa:
Biloowga hore sida ugu dhakhsaha badan iyo kadib ugu badnaan 24 saac kadib markuu soo galo Norway, iyo kadib
xili aan ka horay 7 maalmood markuu soo galo Norway. Natiijadu waa inay diyaar noqoto kahor intaan mudada karantiilku dhammaanNatiijadu waa inay diyaar noqotaa xiliga karantiilka kadib muddo aan ka horay 10 maalmood.
Shardi dhaafka hadda ee karantiilka soo gelitaanka ayaan qabanayn dadka ka imaanaaya UK, ayagoo laga reebay dhawr shardi oo kale.
Qof kasta oo dibada uga imaanaaya Norway waa inuu galaa karantiil 10 maalmood ah, marka laga reebo dadka kasoo safraaya qaybo kamid ah gobalka Nordic ga/Yurub halkaas oo tirada dadka caabuqu ku faafay ay aad u yar tahay (aagaga iyo wadamada midabka jaalaha ah la saaray).
Qariirada wadamada midabka cas iyo jaalaha la saaray ee ku yaala Yurub (Ingiriis kaliya)
Markaad soo gasho Norway, waa qasab inaad toos u gasho karantiil, qof kasta oo ka wayn da’da 12 sano waa qasab inuu xidho gafuur xir ilaa uu kasoo gaaro meesha uu karantiilka ku galaayo.
Shaqsiyaadka usoo safraaya Norway si wadajir ah oo caadiyan isla nool ayaa iskula qaadan kara mudada karantiilka isku guri.
Waad so gaabin kartaa waqtiga karantiilka haddi laga waayo cudurka koronada ila laba jeer, inta aad ku jirto karantiilka.
Baadhitaanka koowad wa inaa laga qaada sadex cisho gudaheed marka aad dalka ku so noqotid. Taas oo noqon karta tijaabo deg deg ah ama baaritaanka PCR.
Baadhitaanka labaad wan in aa ugo horeyn laga qaada, toddobo maalmood ka dib imitankaaga, waa inuu noqdaa baaritaanka PCR.
Waajibaadka karantiilku wuxuu khuseeya illaa iyo intaad ka helayso natiijada baarintaanka labaad oo koronada, natiijadas oo ah in laga waaayay koronada.
Kuwa ku sugnaa Boqortooyada Ingiriiska ama Koonfur Afrika14-kii maalmood ee ugu dambeeyay ka har imaatinkooda, ma heli doonaan fursad ay ku gaabin karaan karantiilkooda safarka.
Haddii aad yeelato astaamaha COVID-19 intaad karantiilka ku jirto, waa inaad gashaa takoor aadna la xariirtaa waacda caafimaadka maxaliga ah si laguugu diyaarsho baaritaan. Lambarka taleefanka. +47 116117.
Markay qasab tahay inaad karantiil gasho, waxaad caadiyan joogi doontaa hudheelka karantiilka. Tani waxay ka dhigan tahay in haddii aad timid Norway si aad u shaqayso ama u booqato saaxiibadaa, qoyskaaga ama lamaane, inay caadiyan qasab tahay inaad karantiilkaaga ku dhamaysato hudheelka karantiilka.
Waa in loo diyaarshaa ilmaha yar ee aan waalidkiis la socon ee aan ka reebayn amarka karantiilka qof wayn oo ku daryeelka hudheelka karantiilka.
Shaqsiyaadka soo socda uma baahna inay galaan hudheelka karantiilka:
Dadka dagan Norway (ka diiwaan gashan Diiwaanka Qaran ee Dadwaynaha) ama awooda inay cadeeyaan inay daganaansho rasmi ah ka haystaan Norway (tusaale daganaansho ka diiwaan gashan Maamulka Canshuuraha ee Norway ama heshiiska kirada guriga).
Dadka awooda inay cadeeyaan inay boos fiican oo ay joogaan haystaan intay ku jiraan karantiilka. ‘Meel ku haboon’ waxaa laga wadaa hooy leh hal qol, musqul gaar ah, jiko gaar ah ama adeegga cuntada, halkaas oo ay suuragal tahay in laga fogaado u dhawaanshaha dadka kale. Goobta ayaa tusaale ahaan noqon karta guriga fasaxa, hudheel ama hooy kale oo loo diyaarshay qofka.
Dadka isqaba ama leh carruur ay isla dhaleen qof daganaansho rasmi ah ka haysta Norway, iyo carruurtooda aan da’da qaangaarka gaarin. Shaqsiyaadkaan waxay ku qaadan karaan mudada karantiilka guriga xaaskooda ama waalidka kale.
Dadka ganacsiga u yimaada ee shirkada ay u shaqeeyaan ama macmiilkoodu u diyaarshay meelo gar ah oo ku haboon oo hal qol ah. Waa qasab inaad haysato cadaynta sheegaysa inaad doonayso inaad shaqo ama hawl qabato iyo in shirkada aad u shaqayso ama macmiilku kuu diyaarshay gurigu kugu haboon. ‘Hooy ku haboon’ waxaa laga wadaa meel ay suuragal tahay in laga fogaado u dhawaanshaha dadka kale, oo leh hal qol oo TV iyo interneed leh, musqul gaar ah, iyo jiko gaar ah ama adeegga cuntada. Cadaynta ayaa noqon karta tusaale heshiiska shaqada ama heshiiska hawsha iyo shaacin kasoo baxday loo shaqeeyaha oo qeexaysa hooyga. Bayaanku waa inuu sheego meesha aad joogayso, iyo sidoo kale magaca, ciwaanka iyo nambarka taleefanka cidda aad u shaqaynayso ama macmiilka.
Dadka magangalyo doonka ah iyo qaxootiyaasha dib u dajinta loo sameeyay.
Darawalada gaariyaasha xamuulka ah ee xirfada leh ee mudada dheer safra iyo shaqaalaha tareenka ee aan u shaqayn tareenada xamuulka, haddii ay awoodaan inay ku qaataan mudadooda karantiilka halka socdaal ee gaariga ama tareenka kaasoo leh hooy ay joogi karaan.
Waaxaha milatariga shisheeye ee Norway u imaanaaya tababarka, dhoola tuska ama hawlgal ay ogolaatay Wasaarada Difaaca Norway. Ardayda shisheeye ee daganaa Norway kahor intaysan waxbarashada bilaabin kuwaas oo ka diiwaan gashan Diiwaanka Dadwaynaha ee Norway, ayna ku jiraan ardayda u diiwaan gashan inay dagan yihiin wadanka ay wax ka bartaan sabab la xariirta xeerarka gaarka ah ee Nordic ga ee quseeya diiwaan gelinta dadka. Inta lagu jiro mudada karantiilka, waa inay iska ilaaliyaan inay u dhawaadaan shaqsiyaadka ay la wadaagaan hooyga ee aysan la noolayn kahor intaan mudada karantiilku bilaaban.
Shardi dhaafyadu waxay u qaadanayaan inaad joogi doonto guriga ama hooyga kugu haboon inta lagu jiro mudada karantiilka.
Qaybta lagaa rabo inuu ku bixiso lacagta hudheelka karantiilka ayaa ah NOK 500 maalintii shaqsiyaadka gaarka ah ee ka wayn 18 iyo shirkadaha loo shaqeeyo. Wax lacag ah lagama qaadaayo ilmaha ka yar 10 sano ee qolka la joogaaya waalidka ama masuulkooda. Carruurta da’doodu u dhaxayso 10 ilaa 18 sano, lacagta qofkii laga qaadaayo waa NOK 250 maalin kasta. Lacagta laga qaadaayo qofka karantiilka galaaya ayaa loogu bixinayaa hudheelka karantiilka qaab caadi ah, midkood markuu qofku soo galo ama kahor intuusan bixin.
Baaritaannada COVID-19 ayaa lagu bixin doonaa bilaash intaad joogto hudheelka karantiilka.
Karantiilka soo gelitaanka ee shaqaalaha
Xeerka guud ayaa ah inaad gasho karantiil markaad soo gasho Norway, laakiin waxaa jiro shuruudaha qaar oo la dhaafaayo. Qaar kamid ah shardi dhaafyada ayaa qabanaaya labadaba inta lagu jiro iyo xiliga ka baxsan saacadaha shaqada, halka qaar kale qabanayaan inta lagu jiro saacadaha shaqada.
Qof kasta oo soo galaaya Norway kana imaanaaya wadan uu aad ugu sareeyo faafida caabuqu:
Waa qasab inuu galo karantiil 10 maalmood ah kahor intaysan shaqada bilaabin
Waa yaraayn karta waqtiga karantiilka safarka, marka heshid laba jawaab oo laga waayay xanuunka koronada, sida lagu sharxay qaybta kore.
Liiska gobalada iyo wadamada caabuqu aadka ugu faafay (Ingiriis kaliya)
Shardi dhaafyada waajibka karantiilka inta lagu jiro saacadaha shaqada ee shaqaalaha qaar
Haddii aad tahay shaqaale shisheeye oo ka imaanaaya wadamo kale oo ku jira EØS ama Switzerland kuwaas oo ku jira shardiga karantiilka,ama ah qof dagan Norway una aaday wadamadaan shaqo ama hal shaqo:
waa qasab inaad karantiil gashaa ilaa lagaa waayo cabuuqa
waxaad bilaabi kartaa shaqada kadib marka koobaad ee baaritaanka Norway lagaaga waayo caabuqa, laakiin waxaa qasab ah in lagu baaro sadedii maalin ba mar muddo 10 maalmood ah aadna ku jirto karantiilka
Waa inaad ku noolato qol gaar ah inta lagu jiro karantiilku (tani ma khusayso dadka deggan Norway ee ka soo noqda shaqa ama shaqooyinka laga qabto EØS ama Switzerland).
Ka reebitanka sharciga ma khuseeyo haddi aad ku sugney aagagga uu si gaar ah ugu badan yahay infekshanku 10-kii maalmood ee ugo danbeysay kar hor intaadan imaan Norway.
Wadamada iyo gobalada ku yaala EEA/Switzerland oo ay qasab tahay in karantiil la galo, laakiin leh shardi dhaafyo la siiyo shaqaalaha: wadamada ku jira qariirada cas (Ingiriis kaliya).
Haddii aad ka imaanayso gobalada qaarkood oo ku yaala wadamada Nordic ga ah ee caabuqu aad u hooseeyo, waa lagaa dhaafayaa shardiga karantiilka.
Wadamada iyo gobalada heerkooda caabuqu aadka u hooseeyo (Ingiriis)
Socdaalayaasha iho dadka sida joogtada ah ugasoo gudba xaduuda
Shaqsiyaadka, wax ka badan hal mar inta lagu jiro 15 maalmood, kasoo gudba xaduuda Norway kana yimaada gobal ku yaala Sweden ama Finland kuwaas oo ku jira wadamada karantiilku ku waajibay ayaa laga dhaafayaa karantiilka haddii ay maraan baaritaanka korona fayras maalinta ay soo galaan Norway kadibna todobadii maalmoodba mar mudadaas kadib, haddii wax ka badan todobo maalmood ay dhaaftay lagasoo bilaabo markii koobaad e looga baaray caabuqa SARS-CoV-2 gudaha Norway.
Darawalada gaariyaasha xamuulka ee safarka dheer mara, shaqaalaha tareenka iyo shaqaalaha diyaaradaha ayaa laga reebayaa sharciga karantiilka. Kuwaa aay quseyso waa inay la xiriiraan goobtooda shaqo, iyaga u caddeynaayo waxa khuseeya.
Xog badan akhri (Ingiriis kaliya)
Qaybaha soo socda ee shaqsiyaadka ayaa gabi ahaanba ka reeban sharciga karantiilka socdaalka ee soo gelitaanka wadanka inta lagu jiro iyo xiliyada ka baxsan saacadaha shaqada:
Shaqsiyaadka awooda inay cadeeyaan inay horay u qaadeen caabuqa COVID-19 lixdii bilood ee lasoo dhaafay, oo lagu xaqiijiyay baaritaanka PCR ama baaritaanka antigen.
Shaqsiyaadka u safra Norway si ay uga qaybgalaan gelitaanka lagu heshiiyay ama la qorsheeyay ee u dhaxeeya waalidka iyo carruurta. Isla arintaas ayaa qusaysa shaqsiyaadka kusoo laabanaaya Norway ee ka yimid la kulanka waalidkooda ku sugan dibada.
Dadka ay marti qaadeen maamul ka jira wadanka Norway sabab la xariira siyaasada arimaha dibada.
Shaqsiyaadka waxaa la siin karaa shardi dhaaf ku aadan karantiilka si ay u booqdaan qof qaraabo ah oo u dhaw oo aad u xanuunsan, ama ay ka qaybgalaan sagootinka ama tacsida qof ehelkood ah. Shardi dhaafka karantiilka ayaa kaliya ku qabanaaya intaad booqanayso qofka jiran ama ka qaybgalayso sagootinta/tacsida. Shardiga karantiilka ayaa haddii kale qabanaaya. Madaxa caafimaadka ee magaalada masuulka ka ah bixinta shardi dhaafka noocaas ah. Waa muhiim inaad ka fogaato u dhawaanshaha shaqsiyaadka kale mudada ugu dheer ee macquulka ah.
Haddii lagaa dhaafay shardiga karantiilka aadna yeelato astaamaha SARS-CoV-2, ama dhakhtar uu kaaga shakiyo inaad qabto caabuqa covid-19, waa inaad wali kusii jirtaa karantiilka.
Shaqsiyaadka la siiyay shardi dhaafku waa inay iska baaraan covid-19 markasta oo ay suuragalayso.
Waxyaabaha la xariira karantiilka soo gelitaanka wadanka
Waa qasab inaad marto karantiilka soo gelitaanka ood ku qaadanayso hudheelka karantiilka am meel kale oo ku haboon haddii lagu siiyo shardi dhaaf ku aadan hudheelka karantiilka sida lagu qeexay liiska kore.
Waa inaad kaliya ka baxdaa meesha aad joogto haddii aad awoodo inaad ka dheeraato dadka kuu dhaw ee aan ahayn kuwa qolka kula jooga.
Waa inaadan gelin goob kasta oo shaqo oo dadka kale ay joogaan, dugsiyada iyo xarumaha barbaarinta carruurta.
Waa qasab inaadan raacin gaadiidka dadwaynaha, marka laga reebo inaad ku aadayso ama uga imaanayso garoonka diyaaradaha, dekada ama goob kale oo lamid ah oo la xariirta soo gelitaankaaga.ka bixitaankaaga Norway. Markay sidaan dhacdo, waa qsab inaad gafuurka xirato haddii aad ka wayn tahay 12 sano.
Waxaad kaheli doontaa xog dheeraad ah oo ku saabsan korona fayraska oo ku qoran luuqado kale halkaan (regjeringen.no)
Xogta waxaa bixisay Waaxda Caafimaadka ee Norway